विश्वकपः न्यूजिल्याण्डले टस जित्यो, टिममा को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकपः न्यूजिल्याण्डले टस जित्यो, टिममा को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, असार ४ । इंग्ल्याण्डमा जारी आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको खेलमा न्यूजिल्याण्डले टस जितेर बलिङ रोजेको छ । वर्षाका कारण ढिलो गरि टस भएको खेल खेल ४९ ओभरमा झारिएको छ । आज टिममा को-कोले पाए मौका? हेर्नुस्
दक्षिण अफ्रिकालाई आजको खेल जित्नैपर्ने दबाब छ । यदि उसले यो खेल हारेमा आगामी बाटो बन्द जस्तै हुनेछ । गत संस्करणमा न्यूजिल्याण्डसँग पराजित भएपछि दक्षिण अफ्रिका सेमिफाइनलबाट घर फर्किएको थियो । पछिल्लो खेलमा अफगानिस्तानविरुद्ध ९ विकेटले विजयी भएपछि दक्षिण अफ्रिका लयमा फर्किएको देखिन्छ । तर, शानदार प्रदर्शन गरिरहेको न्यूजिल्याण्डविरुद्ध जीत हासिल गर्न भने दक्षिण अफ्रिकालाई ठूलो चुनौती छ । तालिकामा न्यूजिल्याण्ड ७ अंकका साथ तेस्रो र दक्षिण अफ्रिका ३ अंक बटुल्दै आठौं स्थानमा छ ।
ट्याग्स: South Africa Vs New Zealand